Dad horleh oo Soomaaliya ugu geeriyooday Cudurka COVID-19 - Radio Risaala: Somali News Online
Home Covid19 Dad horleh oo Soomaaliya ugu geeriyooday Cudurka COVID-19
Dad horleh oo Soomaaliya ugu geeriyooday Cudurka COVID-19
Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay inay Feyruska Karoona ay u geeriyoodeen 5 Ruux, taasi oo tirada guud ee dadkau geeriyooday ka dhigeysa 113 Ruux.
Sidoo kale Wasaaradda Caafimaadka ayaa caddeysay in la diiwaan geliyay 63 xaalado cusub oo COVID-19 ah, oo kala jooga puntland, 23 qof, , Smaliland 24 qof, Banaadir 16 taas oo tirada guud ee xaaladaha dalka laga diiwaan geliyay ka dhigeysa 4,445.
Bukaannada cusub 54 waa rag. 9-na waa dumar, dadka cudurka laga helay ayaa waxaa ay yihiin kuwii la baaray Todobaadkii la soo dhaafay, welina ay socdaan baaritaannada.
Marwo fowsiya ayaa dhawaan shaacisay in uu soo laba kacleeyay cudurka Coronavirus, isla markaana dowladda Soomaaliya ay dib u howlgelisay Xarumaha lagu baxnaaniyo dadka laga helo Cudurka COVID-19.
Previous articleDadka ka qaxaya dagaalka ka socda Itoobiya oo kordhay
Next articleMadaxweynaha Koonfur Galbeed oo weerar afka ah ku qaaday musharixiinta shireysa